Ethereum Wallet ImToken has $ 35B ezifakwa, Ngaphezu kwe 99% US amabhange - Blockchain Izindaba
Ethereum Wallet ImToken has $ 35B ezifakwa, Ngaphezu kwe 99% US amabhange
China-based ImToken, ngomunye wabokuqala Cryptocurrency futhi Ethereum wallets lokuphekiwe-Apple App Store, uye kusetshenzwe ezingaphezu kuka $ 35 billion ngonyaka ezifakwa eminyakeni embalwa edlule, outperforming Coinbase.
Ngokufana Blockchain, MyEtherWallet futhi MyCrypto, ImToken kuyinto mahhala futhi okungezona portal isikhwama evumela abasebenzisi ukugcina, ukuthumela nokwamukela cryptocurrencies ezifana Ethereum ngenkathi esaziwa GCWELE ENGAMELA okhiye zabo zangasese kanye nama-akhawunti.
Ezinsukwini zokuqala of Ethereum, ngaphambi ekuthuthukiseni wallets athandwayo like MyEtherWallet futhi MetaMask, ImToken wayewukuphela okunokwethenjelwa mobile abasebenzisi isikhwama zingase zisebenzise kumadivayisi eselula. ImToken kuqala-Umhambisi inzuzo futhi inkimbinkimbi lokusebenza kuholele yesikhulumi yokusingatha ezingaphezu kuka $ 35 billion ngonyaka ezifakwa, ezimele ezingaphezu kuka 99 amaphesenti US amabhange.
NgoMeyi, ZeBloomberg, babike ukuthi Xapo, eye kusetshenzwe ezingaphezu kuka $ 10 billion ngonyaka ezifakwa phezu eminyakeni emithathu edlule, has ngaphezulu ezifakwa yayo kuka 5,670 amabhange e-United States noma 98 amaphesenti amabhange wezwe. $ 35 billion ngonyaka ezifakwa ngoba ethers nezinye cryptocurrencies ziyonenza ImToken phezulu 0.5 amaphesenti, kanye namabhange ezinkulu nezinye izikhungo zezimali.
Investment kusukela Chinese VC Giant IDG Capital
ImCrypto IDC Capital sika China-based, okuyinto enye yezindawo ezinkulu kakhulu ibhizinisi dolobha amafemu e-Asia, Uthole $ 10 abayizigidi ezingu-round ngezimali kuleli sonto. IDG Capital usise okungaphezu kokuphonswe 700 izinkampani kanye 150 kweminyango yimpumelelo, kuhlanganise izinkampani dollar ngezigidigidi zamaRandi ezifana umakhalekhukhwini umenzi Xiaomi, ibhethri umenzi egqokenayo Anker, cryptocurrency inkampani Circle kanye eguqulayo cryptocurrency Coinbase.
Imodeli yebhizinisi ye ImCrypto siyafana ka Blockchain nezinye ukuvinjelwa-non-edepho ezisekelweni. Ngenxa ukusebenza walo esobala kanye ne-software yayo khulula, alinaso eqondile yokuziphilisa. Nakuba inkimbinkimbi yesikhulumi ImCrypto kwagcina kuholele ekubeni impumelelo yayo yesikhathi eside, nobunzima ukwenza imali ImCrypto naphezu zezigidi zamaRandi egcinwe yesikhulumi bekuyobhekwa njengokukhipha inkinga enkulu yilabo abatshala izimali,, ikakhulukazi ibhizinisi dolobha amafemu, bendabuko umkhakha ubuchwepheshe.
IDG Capital sika $ 10 million kuye kwabonisa ukuthi bayasethemba ukukhula kwesikhathi eside we cryptocurrency futhi isikhwama opharetha. Nakuba wallets non-zokuposa-free awunazo yokuthengisa ongaphakeme inzuzo engenayo, ibhizinisi dolobha amafemu namanje ukusebenzisa izigidi zamadola engabiza uxhaso, siqaphela bezikhali cryptocurrency wallets.
“Sibone bezikhali Ethereum ngesikhathi usaqala kakhulu futhi ugxile umehluko thina encintisana, ukukhula kwaba organic ngokugcwele, sasingenalo yokumaketha noma ukukhangisa isabelomali,” wathi ImToken umsunguli Ben Yena, esishoyo ukuthi umuntu asanda kuluthola ukusebenza dolobha IDG iyongenza inkampani ukuba aphishekele ukumaketha kanye ukunwetshwa nolaka ku cryptocurrency ezimakethe zomhlaba.
Okusanda, ngesikhathi enengxoxo Bloomberg Ithelevishini, Dan Morehead, CEO Pantera Capital, a $ 1 bhiliyoni cryptocurrency uthango Isikhwama, wathi ukulinganisa emakethe cryptocurrency ingase idlule $ 40 isigidintathu ngokuhamba kwesikhathi.
“I $ 400 bhiliyoni mfihlo emakethe bungafinyelela $ 4 isigidintathu, ngisho $ 40 isigidintathu nakanjani kungenzeka, kungcono isibikezelo engu-10, ngeke kwenzeke ubusuku,” Wathi Morehead.
Ukubolekisa ngezindodla ibhizinisi dolobha amafemu kanye nezimali uthango ngokuvamile banethemba lokuthi kuyoba khona imvelo eside wemakethe cryptocurrency futhi uqiniseka ukuthi cryptocurrencies uyoba ikilasi enkulu yefa elizoqhudelana onamafa bendabuko kanye kohlelo lwezezimali emhlabeni wonke.
Blockchain Izindaba 18 Januwari 2018
yocingo bakhangwa $...
Blockchain Izindaba 16.07.2018
New York nezindaba cryp ...
Thumela Previous:Blockchain Izindaba 02.06.2018
Thumela Landelayo:Blockchain Izindaba 04.06.2018
Blockchain Izindaba 20.08.2018